War saxaafadeed ka soo baxay shirkii golaha Wasiirada Oo Ay maantay yeeshee | Latest News	Friday, May 24th, 2013	Home
War saxaafadeed ka soo baxay shirkii golaha Wasiirada Oo Ay maantay yeeshee
Jun 7, 2012 - 1 Jawaab	Aqrisatay:1039Shir ay maanta yeesheen Golaha Wasiiradda oo uu Hor Kacayay Ku-Simaha Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ahna Wasiirka Ganacsigga & Warshadaha Cabdiwahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin Amniga, Dastuurka, iyo howlgalada Ciidamada.
Ugu horeyntii Wasiirka gaashaandhigga Xuseen Carab Ciise ayaa warbixin ka bixiyay guulaha ay gobalada ka gaareen Ciidamada Xooga dalka Soomaaliyeed iyo Kuwa AMISOM islamarkaana uu tilmaamay in Wakhti dhow ay ciidamada gacanta ku dhigi doonaan Magaalada Kismaayo. Wuxuuna Wasiirku intaa ku daray in Degmada Afgooye laga furay Maxkamada Ciidanka islamarkaana lagu maxkamadeen doono cidii shacabka dambi ka gasho. Sidoo kale Wuxuu sheegay in mar dhow mushaaraadka ciidanka la heli doono islamarkaana ilaa 600 oo askari la soo tababarayo.
Sidoo kale Wasiiru dowlaha Arrimaha gudaha ayaa golaha u sheegay in goobihii laga xureeyay kooxaha nabad diidka ah ee Shabaab sidii loogu sameyn lahaa ciidamo boolis ah. Wuxuuna intaa ku daray in gudoomiyaha degmada Afgooye uu wakhti dhow soo dhameystiri doono maamulkaasi.
Waxaana sidoo kale Golaha warbixin siiyay Wasiiru-dowlaha Dastuurka, howlaha ku saabsan dastuurka dalka iyo meesha ay mareyso. Wuxuuna Golaha u sheegay in Odoyaasha Dhaqanka ay si wanaagsan howlahooda u socdaan islamarkaana ay ku howlan yihiin soo xulista Ergooyinka si loo tixgeliyo heshiiskii Adis Ababa.
Golaha Wasiiradda ayaa go’aan cad ka soo saaray in Hantida Qaranka aaney cidna bixin Karin islamarkaana shacabka looga digayaa iney ka fogaadaan Hantida Qaranka.
Ugu dambeyntii Golaha Wasiiradda ayaa isku raacay iney ilaaliyaan hantida Qaranka, Waxeyna Goluhu amaaneen Ciidamada Xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM guulaha isdaba jooga ah oo ay ka gaareen gobalada dalka islamarkaana ku booriyay iney sii wadaan dadaalada lagaga xureynayo gobalada dalka Kooxaha nabad diidka ah ee Shabaab
Quala Abdi Elmi.(Q C C)
cadnaan says:	June 12, 2012 at 10:07	Fadlan warka iska tifaftira 2 da Mas’uul keebaa wasiir Gaashaan dhig ah